6GB RAM nke OnePlus 3 anaghị edebe ngwa na ebe nchekwa | Gam akporosis
Onye OnePlus 3 nwere nsogbu na njikwa ebe nchekwa ya na 6GB RAM
N'ime atụmatụ niile masịrị anyị kachasị banyere OnePlus 3, wepụtara ụnyaahụỌ bụ nnukwu ikike ya na RAM ruru 6GB. Ọ bụ ezie na 4GB bụ ihe ndabere maka ọtụtụ ngwaahịa dị elu ewepụtara, ndị 6GB ahụ nwere nyere OnePlus 3 ihe pụrụ iche nke iji gosi ọdịiche dị na ndị ọzọ asọmpi ahụ, ọkachasị mgbe anyị nwere ọtụtụ ngwa arụpụtara ma anyị nwere ike ịga site na ibe anyị na nsogbu ọ bụla.
Mana site na ihe anyi nwere ike imata taa, dika ule ufodu emere, OnePlus 3 enweghị ike ijikwa kwesịrị ncheta na RAM site na idebe ngwa ndị dị na oghere a dị mkpa ka onye ọrụ wee nwee ike ịnweta ha n'oge niile. Ọ bụrụ na ọdịiche dị na RAM na ihe, ọ bụ site n'inwe ngwa ọhụụ kachasị ọhụrụ iji gaa ha ozugbo.
A kpaliri OnePlus 3 na a ule ọsọ ọsọ megide Samsung Galaxy S7. Ule a di nfe ma mejuputa inwe mmekorita ya na imeghe ngwa ya na uzo abuo. Nke mbụ na-egosi otú ngwa ngwa ha ga-ebu ngwa maka oge mbụ, ebe nke abụọ na-egosi otu ngwaọrụ si nwee ike idobe ngwa na ebe nchekwa.
Galaxy S7 nwere ike nweta otu nkeji na otu nke abụọ na agba nke mbụ, ebe nke abụọ nwetara 33 sekọnd. Agba nke mbụ maka OnePlus 3 bụ sekọnd iri ji nwayọọ, ebe nke abụọ bụ ihe jọgburu onwe ya na oge nke otu nkeji na 10 sekọnd. Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ebe a na-eme ule ahụ, achọrọ OnePlus 3 bubatagharịa ngwa niile na nke abụọ ma enweghị ike idebe ibe weebụ n'ime Chrome na ebe nchekwa.
Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ekwentị software nwere a ebe nchekwa manager a bit ike ike, ya mere ọ ga - abụ ihe gbasara OnePlus inwe ike idozi ya nke ọma na izu ndị na - abịanụ na mmelite na - enye gị ohere iji ohere nke ịnweta ọnụ na 6GB RAM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 3 nwere nsogbu na njikwa ebe nchekwa ya na 6GB RAM
ma ka ọ dị ugbu a, iphone dị elu na 2GB ... ihe na-agwa m na igbu ijiji na egbe ala anaghị arụ ọrụ mgbe niile ...
O doro anya na ọ bụrụ na anyị elele RAM eji ngwa anọ ahụ dị na mbụ, ọ dịkarịa ala ọkara
Enwere m otu n'ime gigs 2 nke RAM ma kwuo na pasent dịka nke gig
LG mara ọkwa X Power, X Mach, X Style na X Max
-Esi mee ka gị gam akporo dị ka Apple si iPhone 6